Dheef iyo waxyeello | February 2020
Kelp ayaa qalalay: faa'idooyinka iyo waxyeelada
Badeecooyinka badankood waxaa loo tixgeliyaa alaabta "hiwaayadda". Tani waa qayb kaliya oo run ah - xaqiiqda ah, waxay leeyihiin tiro aad u badan oo ah xeryahooda waxtar leh kuwaas oo noqon kara mid waxtarka leh qof walba. Oo markaad eegtaan xariggaas waa algae. Wax badan oo aan ka baran karno mid ka mid ah dhirtaas, ogow waxa ku habboon kelp, iyo hababka gelitaanka ee tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka.
Usneya waa dharbaaxo, waa daaweyn dabiici ah oo adag. Lichen thalli waxaa loo isticmaalaa dib u soo kabashada, daaweynta cudurada kala duwan. Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, waxaa lagu yaqaanay sifooyinka wanaagsan ee dhirta. Cunnada daaweynta ayaa laga soo gudbiyey jiilka ilaa qarnigana way ka badbaaday ilaa maanta. Sharaxaadda Botanical ee Usnea waa dhar la leh sallus dheer, taas oo la mid ah gadhka (halkan magaca).
Waa maxay saliidda waxtarka leh ee jirka bini'aadamka
Cabbirta sisinta ee leh magac magac leh oo caan ah ayaa soo jiitay dareenka dadka in ka badan hal qarni iyada oo ay sabab u tahay qiimaha faa'iidada iyo qiimaha tamarta. Waxay ka heshay codsiyo ballaaran ee karinta, daawada dhaqameed, kozmetoloji. Isticmaal miraha iyo sidoo kale saliid. Faa'iidooyinka iyo waxyeelada hadalada ugu dambeeya ee dheeraad ah.
Salt: sifooyin faa'iido leh iyo waxyeelo loo geysto jirka jirka
Midkeen kastaaba wuxuu isticmaalaa cusbo maalin kasta, iyada oo aan ku dhowaad wax kasta oo saxan ah ay u muuqdaan kuwo aan fiicnayn. Mararka qaar waxaan ku badali karnaa xilliga dhadhanka, hase yeeshee qadar yar oo ka mid ah macdanta ayaa weli joogi doona iyaga. Iyadoo aan cusbo ku jirin, waa suurtogal in la ilaaliyo khudaarta, hilibka ama kalluunka. Maanta waxaan baran doonaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan waxa sheygani yahay, sababta ay muhiim ugu tahay jirkeena, iyo in uu jiro xiriir u dhexeeya miisaanka iyo xaddiga milixda.
Baruurta Mutton: Waa maxay faa'iido leh, sida loo dhalaalayo, waxa la sameeyo
Liiska cuntooyinka cuntada waa mid ballaadhan oo ay ku adkaan karto inay liisto, gaar ahaan marka la tixgelinayo doorashooyinka gastronomiska ee kooxaha jinsiyadaha kala duwan. Maqaalkeena waxaan ka wada hadli doonaa mid ka mid ah alaabta aadka u qalalan - baruurta wanka (ama dufanka dufanka), taas oo aan caadi aheyn dhulka Ukraine iyo Ruushka, sida dalalka kale ee adduunka.
Qori oo leh malab: sifooyin faa'iido leh iyo khilaafaadka, cuntada sida caadiga ah
Iyadoo xanuunka cuncunka, hargabka, ujeedooyinka qurxinta iyo sida sonkorta beddelka ah, malabku wuxuu ku jiraa hudheelka hanti walba. Sidoo kale waxay khuseysaa qoraxda basbaaska leh, taas oo ay ku adag tahay in la qiyaaso keega kareysa ama kuleylka la isku qurxiyo. Marar badan ayaan u isticmaali karnaa waxyaabahan si gooni ah. Laakiin labada ninba, waxay keeni karaan faa'iido badan oo dheeraad ah, taas oo aan ka wada hadli doonno dheeraad ah.
Cinnamon Caano Slimming
Maqaarka luminta miisaanka oo wax ku ool ah waxay daneynayaan dumar badan, sidaa daraadeed dhammaantood waxay isku dayayaan inay helaan fursadda ugu haboon ee naftooda. Inta badan waxaa lagu yaqaanaa faa'iidooyinka qoraxda ee miisaanka lumista, laakiin tani waxay ka fog tahay waxa qof walba ka ogaanayo ficilkiisa caanaha. Waxaan kugula talineynaa inaad tixgeliso ikhtiyaarkan cabitaanka waxtar leh oo wax badan ka baran lahaanshaha guryaha.